Ungazi kanjani ukuthi uthando noma ubungane ▷ ➡️ Zitholele Ku-inthanethi ▷ ➡️
Ukwazi kanjani ukuthi uthando noma ubungane. Kujwayelekile ukuthi uzizwe udidekile uma sikulelo gama elithi «akukho okungaphezu kokuba abangani«. Uyazibuza: Wazi kanjani ukuthi ubungane nje noma enye into? Ingabe uyafuna ukwazi ukuthi ukhona ngempela endaweni yobungane noma uma umuntu omkhathalelayo enezimvemvane esiswini uma ekubuka? Ukuze uqiniseke, funda lesi sihloko ukuze uthole amathiphu futhi uthole izimpawu ezicashile zentshisekelo yabesilisa.
1 Ukwazi kanjani ukuthi uthando noma ubungane ngokusebenzisa ezinye izimpawu
1.1 1. Ikutshela konke
1.2 2. Khuluma ngomunye umuntu
1.4 4. Uyihlombe nje lokukhala
1.5 5. Zizwe uvalo eceleni kwakho
1.7 7. Ukuthintana nomzimba
Ukwazi kanjani ukuthi uthando noma ubungane ngokusebenzisa ezinye izimpawu
Yazi ukuthi uthando noma ubungane ngokusebenzisa izimpawu
Yiqiniso, icala ngalinye lihlukile. Abantu basabela ngendlela ehlukile futhi nabo baziphatha ngendlela ehlukile. Nokho, naphezu kwalokhu, kungenzeka khomba ezinye izimpawu ukuze uziqonde uma kukhona okunye noma ubungane obuhle nje.
Kubalulekile ukukucacisa ukuthi asikho isidingo sokuba ne-paranoid futhi ucabange ukuthi noma yimiphi imininingwane iyisiginali: ikhemistri nokuvumelana phakathi kwenu kubaluleke kakhulu kunanoma iyiphi imanuwali noma umhlahlandlela. Kodwa noma kunjalo, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuveza amaphuzu athile avame ukugqama kubo bonke abantu lapho benesithakazelo kothile.
1. Ikutshela konke
Hlala ucabanga: ingabe ungumuntu umngane wakho abheke kuye ukuba akhulume naye lapho enezinkinga? Mhlawumbe usendaweni yobungane ngempela. Lapho uthando lubuyiselwa, kukhona a umoya wemfihlakalo nemizwelo. Ngakho uma njalo wabelane ngakho konke okwenzeka empilweni yakho Ngawe, akenzi nomzamo omncane wokukuhlaba umxhwele noma adale leso simo sengqondo sokulindela. Kungacishe kwenzeke ngikubona njengomngane kuphela.
2. Khuluma ngomunye umuntu
Uma uzibuza: Wazi kanjani ukuthi ubungane nje noma enye into? Lokhu mhlawumbe kuwuphawu olucacile lokuthi othile ukubheka njengomngane. Uma eqala ukukhuluma ngokuthandana nomunye umuntu, nakanjani usendaweni yobungane. Kungokufanayo lapho ekucela iseluleko sothando ngaphandle kokucabanga ukuthi ungase ube nesithakazelo kuye.
Uma kuyilolu hlobo ukukubiza ngeziteketiso ezimnandi njengokuthi "sisi noma mfowethu", ungase ungabi nomuzwa wokuthi unentshiseko enkulu ngekusasa elibonakalayo. Lokho akusho ukuthi umfana noma intombazane ayisoze yakubona ngamehlo agcwele inkanuko, kumane nje kuwukuthi ungumngane nje.
4. Uyihlombe nje lokukhala
Olunye uphawu oluyisixwayiso lokuthi uyingxenye yendawo yobungane yilapho umuntu ephendukela kuwe lapho obunye ubuhlobo buphela. Zindla ngalezi zimo, ngoba kungenzeka lokho nje ube ihlombe friendly ukukhala ezimeni okunzima ukuzisingatha.
5. Zizwe uvalo eceleni kwakho
Lesi esinye isibonakaliso esivamile sendawo yobungane. Lapho umuzwa ungowothando, kuvamile ukuba umuntu azizwe ethukile. Uma ebonakala engahlaliseki, eqala ukuhleka izinto ezingahlekisi, noma ezama ukukuhlaba umxhwele ngandlela thize, kuwuphawu lokuthi mhlawumbe lolu thando lwedlula ubungane. Ebudlelwaneni obunobungane, umuntu akenzi mzamo wokuzama ukuhlaba umxhwele noma ukujabulisa omunye umuntu.
Olunye uphawu oluvamile lobungane yilapho esho izinto ngaphandle kokukhathazeka nakancane ngokuthi uzosabela kanjani kulokho akushoyo, okungukuthi, akukho ukukhathazeka ngokuthi uzosabela kanjani.
Wazi kanjani ukuthi ubungane nje noma enye into? Lolu phawu lulula! Ingabe ukhuluma ngomuntu ozijwayeza nawe? Uke wazama ukujola nomunye umuntu? Olunye uphawu lwesixwayiso. Ngakho-ke, hlala unaka leyo mininingwane noma, okubi nakakhulu, uma uphuma, uthatha umngane ngoba ucabanga ukuthi ungenza umdlalo ophelele.
7. Ukuthintana nomzimba
Uma umuzwa uhambisana, kujwayelekile funa ukuphulula nokuthintana ngokomzimbaKuphakathi komdlalo noma njengezaba zokusondelana. Uma lokhu kungenzeki kuwe, ngisho nalapho ithuba livela, kungenxa yokuthi akananhloso yokulondoloza ukuthintana okukhethekile ngokomzimba.
Ulimi lomzimba lusho okuningi ngomunye umuntu, kodwa udinga ukukunaka. Qaphela njalo ungacabangi ukuthi yonke into eyenziwa yintombazane ngomzimba wayo iwuphawu lokuthakasela ngoba ungaba yindida futhi ubone imikhondo lapho kungekho lutho.